I-2.8.3 Toolbar - I-Geofumed
Ilifa leenguqu zangaphambili ze-Autocad bubuninzi beqoqo elikhulu leetrabars. Nangona bewa kusebenziswa ngenxa yerbhoni, unako ukubenza, ubenze kwindawo ethile kwi-interface kwaye uyisebenzise kwiseshoni yakho yomsebenzi ukuba oko kubonakala kukhululekile. Ukubona imiphi imivalo ekhoyo ukuze isebenze, sisebenzisa inkinobho ethi "View-Windows-Toolbar".
Unokwenza uhlobo oluthile lwezixhobo zobungakanani kwi-interface yayo, udibanise ezinye iipaneli kunye neefestile, esiza kubhekisela kuyo kamva, ngoko unokubamba ezi zinto kwiskrini ukuze ungavavani ngengozi. Yilokho ibinzana elithi "Vimba" kwibha yomgangatho.
Post edlulileyo«Edlulileyo 2.8.2 Umbono okhawulezayo weentetho
Post Next 2.9 PalettesOkulandelayo "